प्रदेश र संघीय सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ : विद्यासुन्दर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफू मेयरमा निर्वाचित भएर काम सुरु गरेको डेढ वर्षमा धेरै काम सम्पन्न गरिसकेको दावी गरेका छन् । ‘म मेयर भएको १७ महिना पूरा भएर १८ महिना लाग्यो । हामीले धेरै कुराहरु सिकेका छौं । हिजोभन्दा आज धेरै कामहरु भएका छन् । धरातलमा रहेर समिक्षा गर्नुपर्छ ।’
रिपोर्टर्स क्लबमा भएको साक्षात्कारमा बोल्दै मेयर शाक्यले काठमाडौंका सडकको पूर्ननिर्माण भैसकेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षलाई हामीले पूर्वाधार वर्ष घोषणा गरेर अघि बढेका छौं । महानगरले जिम्मा पाएको सहायक सडकहरु बनाउने काम लगभग पूरा भएको छ । सडक बनाउने कामको लागि अब ५ वर्ष पर्खिनुपर्दैन् ।’ उनले आफू आएपछि ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको दाबी गरे । यद्यपि काठमाडौंका साखा सडकमात्रै नभएर पुतली सडकको चोकमै खाल्डो खन्ने र पुर्ने काम बाँकी नै देखिन्छ ।
उनले पूर्ननिर्माणसम्बन्धी कामहरुमा सम्पदा पूर्ननिर्माणको २÷४ वटा कामहरु बाँकी रहेको सुनाए । उनले भने, ‘धरहराको काम सुरु भैसकेको छ । दरबार हाईस्कुल पूर्ननिर्माण हुँदैछ । रानीपोखरी र काष्ठमण्डप मन्दिरको पनि काम सुरु हुन्छ । काठमाडौं महानगरको भवन निर्माणको काम छिट्टै सुरु हुन्छ। विवादको कारण काम सुरु हुन नसकेको हो ।’
मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको काम र सडक विस्तारको कामले गर्दा काम गर्न केही अप्ठ्यारो भएको उनले गुनासो पनि गरे । भने, ‘जोरपाटीमा फोहोर थुप्रियो भने पनि काठमाडौंको मेयरलाई गाली गरिन्छ, सितापाईलाको सडक हिलाम्य भयो भने पनि काठमाडौंको मेयरलाई गाली गरिन्छ, सानेपाका सडक धुलाम्य भयो भने पनि काठमाडौंको मेयरलाई गाली गरिन्छ, त्यहाँ नगरपालिका छन् नि ।’
उनले काठमाडौंका सम्पदा पूर्ननिर्माणमा महानगरले कुनै कसर बाँकी नराखेको अठोट पनि सुनाए । भने, ‘काष्ठमण्डप, धरहरा र रानीपोखरीको निर्माण काम छिटो सुरु हुन्छ । यी सम्पदाहरु छिटो बनिदियोस भनेर आवाज उठिरहेको छ ।’ प्रदेश र संघीय सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि काठमाडौं महानगरले गरिरहेको बताउँदै उनले यसको लागि सरकारले आफूहरुलाई धन्यवाद दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘फोहोर मैलाको सवालमा अर्को वर्षासम्म काठमाडौं हिलो नहुनेगरि हामीले काम गरिरहेका छौं ।’
काठमाडौंका विभिन्न सडकहरुमा फोहोर थुप्रिँदा यसबारेमा काठमाडौंको मेयर र महानगरपालिकालाई भन्नु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘जो सँग आश छ, जसलाई विश्वास गरिन्छ, उसैले भन्ने हो । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो मात्रै हाईन, प्रदेश र संघीय सरकारको पनि काम गरिरहेको छ ।’ काठमाडौं महानगरले फोहोरको व्यवस्थापन गर्न छोडिदिने हो भने सिँगो काठमाडौं उपत्यका दुर्गन्धित हुने उनको भनाई छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँग लामो छलफलपछि बञ्चरे डाँडो कसले बनाउने ? सेन्ट्रल ल्याण्डफिल्ड कसले बनाउने ? भन्नेबारे टुँगो लागिसकेको उनले जनाए । त्यस्तै उनले तीन पिप्लेदेखि बञ्चरे डाँडासम्मको सडक कसले बनाउने भन्नेबारे पनि आफूहरुले छलफल गरिसकेको बताए । उनले भने, ‘कमसेकम अब यो बाटो दुई लेनको बनाउनुपर्छ । यसबारेमा पनि हामीले निर्णय लिईसकेका छौं ।’
काठमाडौंलाई स्वच्छ, धुवाँ र धुलोमुक्त सहर बनाउनको लागि महानगरले जेट र ब्रुमरजस्ता आवश्यक उपकरण खरिद भैसकेको जनाउँदै उनले भने, ‘अहिले ५ वटा ब्रुमर आउने प्रक्रियामा छन् । मासिक २५ करोड रुपैयाँ सफाईका कर्मचारीको लागि खर्च भैरहेको छ। तर, पनि काठमाडौं सफा भैरहेको छैन् ।’